Khuraafaadkii Qoraal | Martech Zone
Khuraafaadka u gaarka ah
Isniin, February 15, 2016 Douglas Karr
Mid ka mid ah bogagga aan uga hadlo wadahadal kasta oo aan la leeyahay ganacsiyada waa midka aan ugu yeero khuraafaad u yeelashada. Nidaam kasta oo lagu cabbiro, waxaan doorbidnaa xeerarka habdhaqanka boolean iyo kuwa kala duwan. Hadday tan tahay, markaa taasi. Waa dhibaato, in kastoo, maxaa yeelay taasi maahan sida go'aannada iibsiga loo gaaro. Dhib malahan haddii aad tahay macaamil ama haddii aad ganacsi tahay - kaliya maahan xaqiiqda Safarka macaamiisha.
Kiis ahaan qodobku waa iibsashadayda ah Amazon Echo. Waxaan ku arkay buzz-ka khadka tooska ah markii ugu horreysay ee la bilaabay, laakiin dhab ahaantii baahi uma qabin. Waqtigaas, sidoo kale ma aanan ahayn isticmaale caan ah. Laakiin markii aan inbadan oo ka mid ah ganacsigayaga u iibsaday Amazon, oo aan ku biiray Ra'iisul wasaaraha, oo aan maalin gudaheed ku soo raray, aragtidayda Amazon way isbedeshay.
Wali wax badan kama aan aqoonin Amazon Echo, in kastoo. Maalin maalmaha ka mid ah Facebook, Calaamadee Schaefer sameeyey faallo xiiso leh. Wuxuu xusay inuu lahadlayo Amazon Echo oo aad iyo aad u la mid ah qof qolka ku jira. Maaddaama aan nahay farsamo yaqaan farsamo yaqaan ah iyo xamaasad Amazon ah, waan xiiseynayay.
Farsamo ahaan, waxaan dhihi lahaa taasi runti waxay ahayd taabashadii ugu horreysay ee safarkayga macmiil. Waxaan ka soo wareegay Facebook una dhaqaaqay dhanka Amazon halkaas oo aan ku aqriyay bogga wax soo saarka. Waxay umuuqatay wax qabow laakiin runti ma cadeyn karin kharashka goobtaas kujira. Ka dib waxaan u dhaqaaqay Youtube-ka si aan u arko waxa qabow ee ay dadweynuhu ku qabanayaan banaanka qalabka suuq-geynta.
Waxaan ku soo noqday Amazon oo aan ka akhriyay dib u eegista 1-xiddig oo runti ma arag wax ii diidaya inaan iibsado qalabka… bannaanka ama qiimaha. Xaqiiqdii ma caddeyn karin toy-ga cusub ee xilligaas.
Taabashadii Ugu Dambeysay
Toddobaadka soo socda ama sidii aan ku dhex wareegay webka, qaar ka mid ah xayeysiisyada dib-u-suuqgeynta loogu talagalay Amazon Echo soo booday. Ugu dambayntii waxaan ku dhacay mid ka mid ah xayeysiinta oo waxaan soo iibsaday aaladda. Waxaan qori lahaa dhowr cutub oo ku saabsan inta aan jeclahay, laakiin taasi ujeedka qoraalkan ma ahan.
Ujeedada qoraalkan ayaa ah in laga wada hadlo halka loo aaneyn doono iibinta Amazon Echo. Haddii ay tahay taabashada koowaad, waxaa loo aanayn doonaa Mark inuu yahay qof saamayn ku leh… inkasta oo aanu isagu saamayn ku yeelan qalabka iyo tiknoolajiyadda. Waxaan dhihi lahaa faallooyinka Mark ee ku saabsan 'Echo' wuxuu ahaa ficil wacyigelin ah safarkayga macmiilka. Meelna kama horreyn faalladii Mark ee aan ka warqabey cilmiga Echo iyo qaababka kala duwan.
Haddii qaabka astaantu uu yahay taabashadii ugu dambaysay, xayeysiinta la bixiyay iyo dib u suuq-geynta ayaa noqon doonta isha iibka. Laakiin runti ma aysan ahayn. Haddii aad i weydiiso istiraatiijiyad suuqgeyn dhab ah ayaa igu qancisay inaan iibsado Echo, waxaan ku jawaabi lahaa:
Waxba may ahayn hal istaraatijiyad taasi ayaa iga dhigtay inaan iibsado Echo, dhammaantoodna way ahaayeen. Waxay ahayd faallooyinka Mark, waxay ahayd raadinta fiidiyowyada isticmaale-soo-saaray, waxay ahayd dib-u-eegiddayda dib-u-eegista liidata, waxayna ahayd xayeysiisyada dib-u-eegista. Sidee taasi ugu habboon tahay qolka beddelaadda Google Analytics? Maaha… sida aysan u badnayn safarada macaamiisha.
Waxbaan ka qoray dacwada madaxa banaan ee suuq geynta oo sifo ayaa fure u ah.
Waxaa jira qaab kale laakiin waa mid aad u adag. Saadaalin Analytics la socon kara dabeecadda iibka dhammaan dhexdhexaadinta iyo istiraatiijiyadaha iyo markaad isbeddelada samaynayso, waxay bilaabi kartaa inay isku xirto waxqabadka ku habboon iibka guud. Mashiinadan ayaa markaa saadaalin kara sida hoos u dhigista ama kor u qaadista miisaaniyadda ama waxqabadka istiraatiijiyad suuqgeyn gaar ah ay saameyn ugu yeelan doonto gunta hoose ee guud.
Markaad eegayso dadaalkaaga suuq-geynta, waxaa lama huraan ah inaad aqoonsato in xitaa suuq-geyn aan laheyn beddel toos ah loo aaneeyo ay saameyn guud ku leedahay geeddi-socodka go'aan gaarista macaamiisha. Saameyntuna waa mid sifiican uga baxsan dadaalkeena suuqgeynta - khibrada dhan ee rajada waxay gacan ka geysaneysaa safarka.
Waa kuwan tusaale fudud: Adigu dukaan waad leedahay oo waad jartay shaqaalaha nadaafadda. Maaha in bakhaarkaagu wasakh yahay, laakiin waxaa laga yaabaa inuusan sidii hore u lahayn bilaa camal. Natiijadu waxay tahay iibintaadu inay hoos u dhacdo inta badan dukaamada iibiya si fudud uma dareemayaan inay u nadiifsan yihiin sida dukaanka kale ee xaafadda. Sideed ugula xisaabtami kartaa tan dadaallada suuqgeyntaada? Waxaa laga yaabaa inaad xitaa kordhisay kharashka suuqgeyntaada waqtigan laakiin iibka guud ayaa hoos u dhacay. Ma jiraan wax shay khad ah oo “super nadiif ah” oo ku jira miisaaniyaddaada suuqgeynta… laakiin waad ogtahay inay saameyn ku leedahay.
Maanta, shirkaduhu waxay u baahan yihiin aasaas aasaasi ah oo ka kooban. Laga soo bilaabo degel nadiif ah, jawaabo leh, illaa maqaallada socda ee dhisaya kalsoonidooda, u adeegsiga kiisaska, waraaqaha cad, iyo sawir-qaadista. Kuwaas oo dhammaantood la wadaago, oo qiime lagu daro marinnada bulshada. Kuwaas oo dhammaantood lagu hagaajiyay makiinadaha raadinta. Kuwaas oo dhammaantood gacan ka geysta warsidaha email-ka ee kobciya rajada.
Dhamaan waa muhiim - ma jiro mid aad kan kale uga ganacsaneyso. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isku dheelitirto si habboon markaad aragto saameyntooda, laakiin midkoodna ikhtiyaari uma ahan joogitaanka suuqgeynta internetka oo dhameystiran.
Tags: amazon echodhacamarka hore taabashadamarketing inboundtaabashada ugu dambaysakhuraafaadkhuraafaad u yeelashadafalanqaynta saadaalintasaami saadaalin
Dib-u-celinta: Sida Dib-u-hagaajinta Amazon u shaqeeyo iyo inta ay qaadanayso